ट्रंक लाइन प्रकरण, महसुल नतिर्ने २३ उद्योग उच्च अदालतको शरणमा - UrjaKhabar ट्रंक लाइन प्रकरण, महसुल नतिर्ने २३ उद्योग उच्च अदालतको शरणमा - UrjaKhabar
काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्न बिल काटेपछि २३ भन्दा बढी उद्योग तिर्न नसकिने भन्दै उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
प्राधिकरणले नियमविपरित बिल गरेको र आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै उनीहरू अदालत पुगेका हुन् । उद्योगहरूले विराटनगर उच्च अदालतदेखि तुल्सीपुरसम्म रिट दायर गरेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार सर्वोत्तम र बुटवल सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, हिमाल आइरनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उच्च अदालत पाटमा मुद्दा दायर गर्नेहरूमा अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, युनाइटेड सिमेन्ट छन् ।
यसैगरी, अरिहन्त मल्टि फाइबर, रघुपति जुट मिल, एभरेष्ट पेपर मिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अरिहन्त मल्टि पोलिप्याक र शुभश्री अग्नी सिमेन्टले पनि पाटनमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
जनकपुर उच्च अदालतको अस्थायी इजलाश वीरगन्जमा मुद्दा दायर गर्नेमा जगदम्बा स्टिल, अशोक स्टिल, हामा आइरन, हुलास स्टिल र सूर्य नेपाल प्रालि छन् । यी उद्योगबाट प्राधिकरणले झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।
मारुती सिमेन्टले राजविराज, बाबा जुट मिलले विराटनगर र घाराही सिमेन्टले तुल्सीपुर उच्च अदालतमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल तिर्न नसकिने भन्दै मुद्दा दायर गरेका छन् । प्राधिकरणले कुनैलाई २०७२ लाख साउनदेखि त कतिलाई २०७५ माघदेखि विलिङ गरेको छ ।
प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि २०७५ असारसम्म महसुल छुट भएको भन्दै छुट बिल गरेको छ । साथै, २०७५ माघदेखि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका लागि नयाँ महसुल लाग्ने परिपत्र गरेको छ ।
उद्योगीले वर्षौंदेखि निरन्तर महसुल तिर्दै आएको र एक्का अहिले आएर नयाँ थप शुल्क वा नयाँ दर कायम गर्न नहुने अडान राख्दै आएका छन् । प्राधिकरणले महसुल तिर्नुपर्ने बिल पठाए पनि उनीहरूले नतिर्ने बेहोराको जावाफ पठाएका छन् ।
हिजो लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणका हाकिमहरूले उद्योगीसँग घुल लिएर बिजुली दिने गरेको आरोप लागेको हो । उनीहरूले सर्वसाधारणको भागको बिजुली काटेर उद्योगलाई दिएबापत निरन्तर घुस असुल गर्ने गरेका थिए ।
प्राधिकरणले २०७३ साल साउनदेखि ट्रंक लाइनको महसुल असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसयता २०७५ असारसम्म ट्रंक लाइनको ५ अर्ब रुपैयाँ महसुल असुल हुनुपर्ने सञ्चालक भक्तबहादुर पुनकै प्रतिवेदनमा छ ।
साउनदेखि अहिलेसम्म ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थपिएको प्राधिकरणकै उच्च अधिकारी बताउँछन् । घिसिङ पदमा आएको साढे २ वर्षभन्दा बढी भयो । अहिलेसम्म उनी किन मौन बसे ?
अहिलेसम्म उठ्नुपर्ने ८ अर्ब रुपैयाँ के उद्योगीलाई मिनाह दिने हो ? कि यसमा मिलेमतो गरी आफैंले कुम्ल्याउने दाउ हो ? ८ अर्ब रुपैयाँ बैंकको मुद्दतिमा राखेको भए १० प्रतिशतले वर्षको ८० करोड रुपैयाँ ब्याजमात्र अउँथ्यो ।
साढे २ वर्षसम्म करिब २ अर्ब रुपैयाँ ब्याज नै हुन्थ्यो । यसका आधारमा ट्रंक लाइन प्रयोग गर्नेबाट अहिलेसम्म झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, प्राधिकरण र यसको नेतृत्व कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
२०७३ साउनदेखि लागू हुने भनिएको ‘विद्युत महसुल संकलन विनियमावली’ मा कुनै ग्राहकले २० घन्टा वा सोभन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडर सरह बिजुली लिन चाहे डेडिकेटेड फिडरकै महसुल तिरेर लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
ट्रंक लाइनबाट कुलमानले पनि लुकाएरै बिजुली दिए, किन उठाइएन महसुल ?
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल नतिर्ने ५८ उद्योगलाई उन्मुक्ति, ९ महिनासम्म किन लुकाइयो प्रतिवेदन ?
प्राधिकरणमा झन्डै ८ अर्ब राजस्व अपचलन, घिसिङसहित उच्च कर्मचारी संलग्न रहेको आशंका